ZVINOFADZA chaizvo kuti Jehovha ari kuita kuti vanhu vakawanda vauye kusangano rake rechokwadi! (Isa. 60:22) Izvi zviri kuita kuti patoramba pachidiwa Dzimba dzoUmambo dzakawanda. Pasi rese, Dzimba dzoUmambo dzinopfuura 13 000 dziri kufanira kuvakwa kana kuti kugadziridzwa.
Kuti Dzimba dzoUmambo dzikurumidze kuvakwa nenzira isingadyi mari yakawanda, Dare Rinotungamirira rakachinja mashandiro anoita madhipatimendi ekuvaka. Dhipatimendi Rinoona Nezvemapurani Nokuvaka Pasi Rose iro richangobva kuumbwa uye riri kumahofisi edu makuru kuBrooklyn, New York, riri kushanda nesimba richiisa basa rekuvaka Dzimba dzoUmambo pamberi uye kuita kuti dzikurumidze kuvakwa nekugadziridzwa pasi rese. Dhipatimendi Remunharaunda Remapurani Nokuvaka iro rinowanikwa kumapazi anoti Australasia, Central Europe, South Africa neUnited States, riri kutungamirira basa rekuvaka munharaunda dzemapazi iwayo uye kuti Dzimba dzoUmambo dzikurumidze kuvakwa nenzira isingadyi mari yakawanda. Dhipatimendi iri rinodzidzisawo mapazi ari munharaunda yaro kugadziridza zvivako zvekunamatira zviri mundima dzemapazi iwayo. Uyewo, pabazi rimwe nerimwe pane Dhipatimendi Remapurani Nokuvaka iro rinotungamirira kuvakwa nekugadziridzwa kweDzimba dzoUmambo neDzimba Dzemagungano.
Muna January 2015, vakuru vese vemuUnited States vakapinda musangano vachiita zvekuona pavhidhiyo, uye musangano wacho waitaura nezveurongwa hutsva hwemarongero nemavakirwo eDzimba dzoUmambo uye kugadziridzwa kwadzo. Izvi ndizvo zvavakanzwa pamusangano wacho.
Kuvaka: Mapurani nezvinhu zvekushandisa pakuvaka Dzimba dzoUmambo zvichange zvichienderana nemamiriro ezvinhu emunzvimbo yacho uye mirayiridzo inobva kuKomiti Inobudisa Mashoko yeDare Rinotungamirira. Dzimba dzacho dzichange dzakasimba uye dzisina zvakawanda zvinoda kuzogadziridzwa, asi dzakanaka uye dzisingadyi mari yakawanda.
Kugadziridza: Hama nehanzvadzi dzinenge dzazvipira dzichadzidziswa kuchengetedza nzvimbo dzedu dzekunamatira kuti dzigare kwenguva yakareba.
Basa rekuvaka nekugadziridza Dzimba dzoUmambo harisi rekutamba naro, rakakura chaizvo. Asi kushanda kunoita vanhu vaMwari vakabatana kuchaita kuti basa racho rikurumidze kuitwa nenzira inoita kuti mari yemipiro isapambadzwe.